Ny LG G4 dia hampiasa ny G Pen | Androidsis
Ny LG G4 dia mety hanana stylus
Ireo mpamokatra lehibe indrindra dia efa manenjana ny fiadiany amin'ny taona ho avy 2015. Ny mitete mitete Tsy mijanona izany ary isan'andro isika dia mahalala zava-baovao momba ny sainam-pirenen'ireo orinasa tsirairay.
Hitanay ny sary voalohany an'ny Samsung Galaxy S6, zareo dia manana namoaka ny toetra ara-teknikan'ny HTC Hima, fantatsika daholo tsiambaratelon'ny Sony Xperia Z andiany manaraka avy amin'ny mpanamboatra Japoney. Ary LG? Ny tsaho farany milaza fa ny LG G4 dia hanana stylus.
LG G4 dia afaka nampiasa ny stylus G Pen izay nopihan'ilay mpanamboatra herinandro vitsivitsy lasa izay
Vao tsy ela akory izay dia niresaka momba anao izahay ny patanty izay nangatahan'i LG, ambanin'ny anarana G Pen. Tamin'ny voalohany dia nisy ny eritreritra ny amin'ny mety hananganana phablet mpamokatra Koreana maromaro hananganana ny andiany Note Samsung. SAINGY LG G4 no mety ho finday avo lenta voalohany nampiasa an'ity stylus ity.
Mikasika ireo toetra ara-teknikan'ny LG G4 amin'izao fotoana izao, milaza ny tsaho fa hanao efijery izy 5.3-inch Quad HD mahatratra ny vahaolana 1440 x 2560 teboka, mahaliana kely kely kokoa noho ny tontonana 5.5-inch izay mampiditra ny LG G3.
Raha ny momba ny processeur dia matoky an'i Qualcomm indray i LG ary indrindra ny tovovavy mahafatifaty azy: ny Snapdragon 810, izay manana cores valo, misy cores Cortex A57 efatra ary cores A53 efatra hafa ary maritrano 64-bit, miaraka amin'ny RAM 4 GB.
Ny fakantsary lehibe an'ny LG G4 dia hisy a Lensa 20.7 megapixel, ary hanana fakan-tsary 5 MP eo aloha izy io. Ny bateria 3.500 mAh dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny fitaovana rehetra an'ity fitaovana ity izay handresy noho ny Android 5.0 Lollipop.
Azo inoana fa ny sainam-pirenen'ny mpamokatra Koreana manaraka dia haseho amin'ny andiany manaraka amin'ny Mobile World Congress hatao ao an-tanànan'i Barcelona mandritra ny herinandro voalohan'ny volana martsa.
Ahoana ny hevitrao fa ny LG G4 mampiasa ny G Pen, toy ny phablets ao amin'ny tandavan'i Samsung's Note? Mahita fomban-tsolika ilaina amin'ny finday finday ve ianao sa mieritreritra fa mifantoka kokoa amin'ny takelaka sy phablet izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny LG G4 dia mety hanana stylus
Ny lalao mampiankin-doha indrindra ho an'ny Android; Androany ZOI Survival
Ahoana ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny fifandraisana USB OTG amin'ny Android